Monday June 24, 2019 - 17:05:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in weerar khasaara badan dhaliyay lala beegsaday ciidamo katirsan kuwa gummeysiga Kenya ee duullaanka ku jooga dalka.
Qarax maanta duhurkii ka dhacay inta u dhaxaysa deegaannada Buurgaabo iyo Raaskaambooni ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 10 askari Kenyaan ah oo la socday gaari xamuul ah.
Wariye ku sugan Jubbooyinka ayaa soo sheegay in xoogaga Al Shabaab ay qarax laheleen gaari nuuca ciidanka xambaara ah kaasi oo gabi ahaantiisba goobta ku gubtay, markii qaraxu dhacay kadib waxaa goobta kusoo degay diyaarado ay leeyihiin ciidamada cirka Kenya kuwaas oo daad gureeyay Meydad iyo dhaawacyo.
Kolonyo gaadiid ah oo kasoo amba baxday Buurgaabo kunasii jeeday deegaanka Raaskaambooni oo ka koobnaa 5 gaari ayaa laga reebay hal gaari oo gabi ahaantiisba burburay, ciidamada Kenya ayaa wadada uga tagay gaariga qaraxa looga gubay waxaana islamarkiiba goobta gaaray ciidamo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ka dhacay deegaannada xeebta ku teedsan ee Jubbada Hoose, ciidamada gummeysiga Kenya ayaa weeraro dhiigbax leh kala kulmaya xoogaga Al Shabaab waxayna badanaa weeraradan dhacaan xilliyada ay ciidamada gumeysiga isku gudbinayaan sahayda Melleteri.